Unyaka ongenalo ihlobo: wawunini, izimbangela nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi esimweni sezulu kungaba nemicimbi engajwayelekile kuye ngezimo ezithile. Isimo sezulu esinjalo somhlaba wonke singathinteka lapho kuqhuma intaba-mlilo enkulu eyinhlekelele. Okudumile unyaka ngaphandle kwehlobo kusukela ngo-1816 kwakuyinto ephelele yokubheka ukuthi yiziphi izici zeplanethi ezingathinta kakhulu isimo sezulu.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngonyaka ngaphandle kwehlobo nokuthi ezinye izimo zisithinta kanjani isimo sezulu somhlaba.
1 Unyaka ngaphandle kwehlobo
2 Umthelela wonyaka ngaphandle kwehlobo
Ngenxa yokuqhuma kweMount Tambora, okuyintaba-mlilo eseBagua yayo phakathi kuka-Ephreli 5 no-10, 1816, amafu amakhulu othuli nomlotha akhishwa emkhathini. Bangaphezu kuka-12.000 24 abantu abashonile emahoreni angama-XNUMX okuqala, ikakhulu okubangelwa yi-ashfall nokugeleza kwe-pyroclastic. Ngemuva kwalokho, abanye abantu abangama-75.000 babulawa yindlala nezifo ngemuva kwalokhu kuqhuma okukhulu eminyakeni engu-2.000 XNUMX.
Njengoba kungokunye ukuqhuma okukhulu kunakho konke emhlabeni, kukhishwe izigidi zawo zamathani omlotha wentaba-mlilo namathani ayizigidi ezingama-55 e-sulfur dioxide ukuphakama kwamakhilomitha angama-32 emkhathini. Naphezu kokuqhuma kwesikhashana, umoya wawunemisinga enamandla ehudulela amafu econsana asakazekile entshonalanga. Lokhu kwenza konke okukhishwe yintabamlilo kwajikeleza umhlaba emasontweni amabili nje kuphela.
Ezinyangeni ezimbili kamuva le misinga yafika eNyakatho Pole naseNingizimu Pole. Izinhlayiya zesulphur ezinhle zamiswa emoyeni iminyaka. Ehlobo lonyaka ngemuva kokuqhuma, kwaveliswa iveli yomlotha cishe engabonakali eyayimboze yonke iplanethi. Lolu hlangothi olukhanyayo luveza ukukhanya kwelanga futhi aluvumelanga imisebe ukuthi ifinyelele ngaphezulu, inciphise izinga lokushisa kuyo yonke iplanethi. Ngaphezu kwalokho, kudale umonakalo omkhulu wesimo sezulu emhlabeni jikelele. Kungakho unyaka ongenalo ihlobo wenzekile ngonyaka we-1816.
Akukhona ukuziphindiselela kwaphezulu njengoba kwakucatshangwa ngaleso sikhathi, kodwa ukuqhuma okukhulu kakhulu kwentaba-mlilo. Lokhu kubangela ukuthi isimo sezulu sipholile ngama-degree amaningi iminyaka.
Umthelela wonyaka ngaphandle kwehlobo
Umthelela ogcwele wokupholisa umhlaba wonke ususelwe enhlekeleleni yaseTambora futhi awuzange uqale ukubonwa kuze kube unyaka olandelayo. Amafu okusabalalisa amaconsi e-stratosphere anciphise inani lamandla elanga afinyelela emhlabeni. Umoya, umhlaba nezilwandle kwehlisa izinga lokushisa. Lokhu kungacwaningwa kahle ngamasongo okukhula kwama-oki aseYurophu. Lesi situdiyo isitshela ukuthi unyaka we-1816 wawungunyaka wesibili obanda kakhulu eNyakatho Nenkabazwe kusukela ngonyaka ka-1400.
Njengoba ihlobo nokuwa kuqhubeka, ifu laveza ukushona kwelanga okumangazayo okubomvu, okunsomi nokuwolintshi eLondon. Kungashiwo ukuthi isibhakabhaka besinomlilo kwezinye izindawo. Entwasahlobo ka-1816 kusazoba neqhwa enyakatho-mpumalanga ye-United States naseCanada. Amakhaza nawo afinyelela eTennessee kanti isimo sezulu esiqandayo sagcina ngoJuni. Ayefana namazinga okushisa aphansi okuthi kwezinye izindawo njengeNew Hampshire bekungenakwenzeka ukulima umhlaba.
Kulenyanga bekubanda impela futhi kunezivunguvungu ezinkulu lapho abaningi bebekhona Izinyoni zamiswa yiqhwa zaze zafa emigwaqweni kusasele amasonto amabili nje ukuthi kufike i-solstice yasehlobo. Izilimo eziningi zagcina zibunile emasimini ngenxa yesithwathwa esibi kakhulu. Imihlambi eminingi yezimvu nayo yafa emakhazeni. Lesi yisikhathi lapho isayensi yezulu ebucayi yayingakabi khona futhi kwakungekho sibikezelo sezulu sanoma yiluphi uhlobo.
Ngokungekho kwesayensi, abazinikeleyo benza zonke izivunguvungu zabangelwa nguNkulunkulu zenziwa uphawu lolaka lwaphezulu. IYurophu nayo yabhekana namazinga okushisa aphansi kakhulu nentwasahlobo ebandayo futhi emanzi kunokujwayelekile. Ngenxa yenani eliphezulu le-baron, kube nokuphazamiseka okuhlukahlukene eFrance.
Kunezifundo eziningi ngonyaka ngaphandle kwehlobo futhi ikakhulukazi zisuselwa ekuhlaziyweni kwamasongo ama-oki aseYurophu. Lezi zindandatho ziveza ukuthi kulo nyaka u-1816 ububanda kakhulu kusukela ngo-1400. Ukungezwani kwabahlali kwanda. Amakhaza amakhulu nesomiso kuqothule utshani nezitshalo zommbila ezindaweni eziningi, kanye nemimoya ejwayelekile yango-Okthoba ngo-Agasti. Endaweni yaseYurophu bekunemvula engapheli kanye nokuwa okukhulu kweqhwa, ikakhulukazi ezindaweni ezisezintabeni zaseSwitzerland. Lokhu kudale ukuthi imifula nemifudlana igcwale.
Izindlu zabampofu zaqala ukusebenza ngokuphuthumayo ukonga imifino futhi yonke ifula yayithuthwa ifakwe ezikebheni. Kwakuwukuphela kwendlela yokonga izitshalo ngangokunokwenzeka. EGermany amazambane agcina ebolile esangweni lomhlaba leziphepho ezonakalisa izitshalo eziningi. Ukuvunwa okusanhlamvu nakho kwakuhlangene, amagilebhisi awazange avuthwe ezivinini futhi ngangiwabona cishe nsuku zonke amasonto ama-5 elandelana.
EParis kwakukhona iziphathimandla ezithile zabefundisi ezalela imithandazo ekhethekile izinsuku eziyi-9 ukuzama ukucela uNkulunkulu ukuthi aqede lesi simo sezulu esibi. Abahwebi kulo lonke elaseYurophu bakhuphula amanani entengo, kuyilapho ukucindezeleka kwabampofu kwafinyelela emazingeni athusayo, bonke belindele isivuno esibi. Kokubili eSpain nasePortugal amakhaza aqhubeka namazinga okushisa izilinganiso ezingaba ngu-2-3 degrees ngaphansi kokujwayelekile.
Zaziyimvula enkulu kakhulu ngenyanga ka-Agasti, njengoba amadoda ngokuvamile omile. Amakhaza kanye nomswakama kugcine kulimaze izitshalo ezweni lonke. Umlindi wesibhakabhaka uqaphele ukuthi kuyo yonke inyanga kaJulayi kunezinsuku ezintathu kuphela ezingenafu. Amazinga okushisa abandayo agcina ebulala izithelo, ikakhulukazi amagilebhisi, ngoba ngenza nje ingxenye encane yesivuno. Lokhu kukhiqize iwayini elisezingeni eliphansi. Izihlahla zeminqumo nazo ziyazwela emakhazeni nasekushiseni futhi azange zikhiqize nezithelo ezisezingeni eliphakeme.
Ngamafuphi, bekuyinhlekelele impela edalwe ukuqhuma okukhulu kwentaba-mlilo. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nonyaka ngaphandle kwehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Unyaka ngaphandle kwehlobo
Isimo sezulu se-satellite